PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-11-05 - U-DE SA ULOLELA OWASE-KZN IZEMBE
U-DE SA ULOLELA OWASE-KZN IZEMBE
Ilanga langeSonto - 2017-11-05 - Ezemidlalo - SENZO SOKHELA
LILOLIWE izembe kumdlali wakwazulu-natal obengalibheki ipali kwireal Kings United egijima kwinational First Division (NFD) okuvela ukuthi usohlwini lwabadlali abangase bakhonjwe indlela kwiplatinum Stars edonsa kanzima kwi-absa Premiership.
Iplatinum iyiqale kabi isizini iwukudla kwesibhaxu. Nokho selokhu kufike uroger de Sa ongumqeqeshi wayo omusha, izinto zibukeka zihlangana njengoba isiqala nokunqoba imidlalo. UDE Sa ukubeke kwacaca ukuthi esikwatini sakhe kunabadlali angazi ukuthi basayiniswe kanjani ngoba abakakulungeli ukudlala kulesi sigaba.
Ukubeke kwacaca ukuthi uma sekuvulwe iwindi lokudayiselana ngabadlali ngomasingana (January) kukhona azobafaka amasondo bese esayinisa abanye abanesipiliyoni. Leli phephandaba lithole ukuthi uthobani Kunene wakwanyuswa, ngaphandle kwasepinetown ungomunye wabadlali abasohlwini lwabangase badedelwe yiplatinum.
Lo mdlali usayiniswe yiplatinum ngesizini edlule engalibheki ipali kwikings isadlala kwisouth African Football Association (Safa) KZN ABC Motsepe League ngaphambi kokunyukela kwinfd. Nokho izinto zakhe kazikahlangani kahle njengoba maphakathi nesizini edlule iplatinum imbolekise kuyona ikings.
Leli phephandaba lishayela ude Sa ngalolu daba, uthe: “Okwamanje ngeke ngikwazi ukudalula amagama abantu esizobadedela kumbe esizobasayinisa kodwa khona izinguquko sizozenza uma sekuvulwe iwindi lokudayiselana ngabadlali.